UNICEF Somalia - Media centre - Soomaaliya oo ay abaar ku dhufatey, ayaa carruurta waxaa sidoo kale soo wajahay cudurka loo dhinto ee jadeecada
UNICEF iyo la-hawlagalayaasheeda ayaa wada ololaha tallaalka ee nafaha lagu badbaadiyo
BAYDHABO, SOOMAALIYA, 25 Abriil 2017 – Ku dhowaad 30,000 carruur da’ yar ah, oo qaar badan oo ka mid ah ay soo barokicisey abaar ba’an, ayaa toddobaadkan cudurka dabeysha looga tallaalayaa olole degdeg ah oo ka socda Baydhabo, oo ah magaalo xuddun u ah mid ka mid ah degaannada Soomaaliya ka tirsan ee abaarta ba’an ay ku dhufatey.
Ilaa hadda, ku dhowaad 5,000 xaaladood oo looga shakisan yahay jadeeco ayaa laga soo sheegey guud ahaan dalka, taas oo ka badan 90 boqolkiiba wadarta tiradii dadkii uu cudurku ku dhacay sanadkii 2016kii. Jadeecada, oo ah caabuq ku dhaca neef-mareenka oo uu sababo fayrus oo la isuguna gudbiyo hawada iyo taabashada duufka iyo candhuufta qofka qaba cudurka, ayaa ku faafa xerooyinka barokacayaasha ee ciriiriga ah, ee aan nadaafadda wanaagsan lahayn, oo ku soo batey guud ahaan magaalada iyo degaannada ku hareereysan. In ka badan 100,000 qof ayaa yimid Baydhabo iyaga oo gargaar-doon ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin ugu yaraan 70,000 oo yimid bishii Maarso oo keliya dhexdeeda.
“Cuddurada looga hortegi karo tallaalka marka la eego, ma jiro mid ka dilaasan jadeecada,” ayaa uu yiri Steven Lauwerier, oo ah Wakiilka UNICEF ee Soomaaliya. “Waxaan si wanaagsan ugu xusuusannaa macaluushii dhacdey 2011kii in jadeecada, oo ay weheliyaan nafaqo-xumo iyo barokac, ay gaar ahaan yihiin kuwo marka ay isku darsamaan laaya carruurta.”
Ololaha ka socda Baydhabo ayaa qayb ka ah dadaal lagu tallaalayo 110,000 carruur soo barokacay ah oo da’doodu ka yar tahay 5 sano oo ku nool degaannada ay dhibaatadu faraha kulul ku hayso ee ku yaalla guud ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo in ka badan 250,000 carruur ah oo jooga Somaliland, looga tallaalayo cudurkan faafaya, wixii loo gaaro dhammaadka bisha Maajo. Dadaalka oo ay iska kaashanayaan Wasaaradda Caafimaadka, WHO, iyo tiro kale oo ururrada aan dowliga ahayn ah (NGO-yo) ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah fitamin A dheeri ah oo lagu xoojinayo difaaca jirkooda iyo sidoo kale kiniiniyada goryaanka dila.
Macluumaad dheeri ah fadlan ka eeg www.unicef.org/somalia ama kala soo xiriir